Xafiiska Kingsoft ee ArchLinux + Dayactirka Cayaaraha | Laga soo bilaabo Linux
Xafiiska Kingsoft ee ArchLinux + Khariidadaha Khaladaadka
Xafiiska Kingsoft Waa qol xafiis oo waxbadan ka sheegaya in laga hadlo. Si fudud uxiriiradeeda, oo lamid ah (oo aan la dhihin nuqul) ee isdhexgalka Ribbon ka socda Microsoft.
Laakiin si aanan u helin dhibaatooyin ku tiirsanaanta (kuwa aan u isticmaalno 64 Bits), waa inaan haynaa kaydadka multilib.
Tani waxaan u saxeynaa feylka /etc/pacman.conf iyo khadadka khadadka:
# [multilib] # Ku dar = /etc/pacman.d/mirrorlist
Mar dambe ayaan fulin:
Marka laga hadlayo Archlinux, Xafiiska Kingsoft si fudud ayaa loogu rakibi karaa iyadoo la isticmaalayo Yaourt:
Marka la rakibo, markaan socodsiino, waxaan heli doonaa qaladkii lagu xaliyay maqaalkan, laakiin loogu talagalay Linux Mint.
Xaaladdaas oo kale, waxa ay ahayd inaad sameyso waxay ahayd rakibidda xirmooyinka u dhigma:
Ka dibna u wareeji galka ilaha:
mv mtextra.ttf / usr / share / fonts / wps-office mv symbol.ttf / usr / share / fonts / wps-office mv WEBDINGS.TTF / usr / share / fonts / wps-office mv wingding.ttf / usr / share / noocyada / wps-office mv WINGDNG2.ttf / usr / share / fonts / wps-office mv WINGDNG3.ttf / usr / share / fonts / wps-office
Laakiin marka laga hadlayo halka uma baahnid inaad ku adkaato inaad taas sameyso. Waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan kala soo baxno .zip-ka ka muuqda xidhiidhkan.
Soo dejiso .zip
Waanu fureynaa oo waxaan u wareejineynaa feylasha ay ku jiraan sidaan ku aragnay tillaabadii hore:
Taasi waa taas.
Waxaa laga yaabaa in waxa ugu xun ee ku saabsan codsigan ay tahay inuu ku qoran yahay Ingiriis oo aanan ku badbaadin karin qaab .odt, laakiin waxaan u maleynayaa sidaas LibreOffice Isagu iskuma tuuro waxyaalo, Xafiiska Kingsoft waxay kuu dhaafi kartaa dhinaca waxayna kaa qaadi kartaa isticmaaleyaal badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Xafiiska Kingsoft ee ArchLinux + Khariidadaha Khaladaadka
Shiineysku waxay horey u sii daayeen qayb ka mid ah koodhka dadka bulshada dhexdeeda ah si ay uga caawiyaan tarjumaadda.
Tarjumaada Isbaanishka ayaa socota.
ELAV layaabka Kingsoft Office wuxuu adeegsadaa QT.
Qalbigaygu wuxuu u socdaa LibreOffice weligiisna halkaasuu joogi doonaa.
Laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan soo jiito isticmaaleyaal badan si aan u barto barnaamijka bilaashka ah. Waxaan u maleynayaa Opera iyo Kingsoft Office inay si dadban u caawiyaan iyagoo sawiraya isticmaaleyaasha WINDOWS ee ku jira darajooyinka GNU / LInux.
Waxaan rabay in aan ogaado hadii ay runti mudan tahay in la isticmaalo qalabkan bilaashka ah ama ay kafiican tahay libreoffice, maadaama libreoffice miisaankeedu yahay 425mb laakiin way fududahay in la rakibo oo ay leedahay shaqooyinka aasaasiga ah, si kastaba ha noqotee, waxaan rabaa inaan ogaado sida ay iiga faa iideysan laheyd tan, aniga waxay u baahnaan doontaa inay adeegsato yaourt anigana ma jecli inaan ku rakibo XD halkan, mahadsanid hore
Waad salaaman tahay Linux, runta ayaa ah inaan mudo dheer isticmaalayay waxaanan kugula talinayaa wax kabadan hadii aad la wadaagto dukumiintiyada dadka isticmaala Win ... maadaama iswaafajinta ay aad ufiican tahay, waxaan kahelay mawduucyo kale desdelinux in qaar ka mid ah dadka isticmaala ay yiraahdaan Waxay leedahay waxqabad ka fiican, laakiin maadaama aanan khabiir ku ahayn tan kuguma xaqiijin karo, waxa aan kuu xaqiijin karo ayaa ah iswaafajinta qaababka uu Windows leeyahay, taas oo aan u arko isticmaalkeeda togan.
Ku jawaab Tahuri
Waan ka xumahay, laakiin ma jiro bog xiriirinaya .zip. Mise maba fiirinayo
Ku jawaab elotgamu
Soo gal bakhaarrada Debian, Ubuntu ama kuwa deriska ah ee SSH oo aan ahayn HTTP / FTP